Mootummaan waggaa shaniif aangoo irra ture yeroon isaa waan dhumateef hidhaa irraa akka hiikaman hidhamtoonni siyaasaa Oromoo gaafatan. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMootummaan waggaa shaniif aangoo irra ture yeroon isaa waan dhumateef hidhaa irraa akka hiikaman hidhamtoonni siyaasaa Oromoo gaafatan.
Obbo Jawaar Mohammad, Obbo Baqqalee Garbaa, Obbo Hamzaa Booranaa fi Obbo Shamsaddiin Xayaa xalayaa guyyaa har’aa gara Bulchiinsa Mana Hidhaa Qaalittiitti barreessaniin akka jedhanitti, hogganoota dhaaba siyaasaa waan tahaniif heerri fi olaantummaan seeraa akka kabajamu qabsaayaa turuu dubbatan. Yeroon hojii mootummaas bu’ura heeraa qofaan akka tahu qabsaayaa turuu, ammas qabsaayaa jiraachuu fi borus kan qabsaayan tahuu yaadachiisan.
#OGN Oduu Ammee october 5/2020
Gamtaan Awrooppaa Ibsa ijjannoo Ciimaa Motummaa Itiyoophiyaa irratti baasee jira, Rakkoo biyyaattiin amma keessa jirtu hatattamaan furuu akka qabu, Kanaf Xiinxala Siyaasaa fi Hundeessaa OMN kan tahee Jawar Mohammed fi hidhamtoota siyaasaa akka hikuufi Rakkoo siyaasaa Motummaa federaalaa fi Naannoo Tigraay jidduu jirus akka hatattamaan furuu akeekkachiisa kennee jira ta’uu baannaan Qoqqobbii Dinagdee fi Siyaasa akka irraa ka’uu gamtaan Awrooppaa ibsa baaseen ibse jira.
#OGN_Oolmaa Mana Murtii Dhimma Abdii Raggaasaa
Abdiin erga poolisii Oromiyaatin to’atame ji’a torba darbeera. Galmeen qorannaa yeroo adda addaatti irratti banamaa ture qorannoon xumurame cufame. Yeroo dhumaatiif Fulbaana 4 bara 2013 tti galmeen qorannoo cufame, Abbaan Alangaa guyyaa 15 keessatti himannaa yoo qabaate akka hundeessu, kun yoon hin ta’in manni amala sirreessaa ajaja dabalataa malee akka gad dhiisu ajajee ture.
Guyyaan 15 darbus himannis hin dhiyaanne, manni hidhaas gad hin lakkisne. Kanaafuu hidhaa seeraan alaa kana jalaa qaama isaa bilisa baasuuf bu’uura s.d.f.h.h lkk.177’tiin iyyannaa dhiyeessinee manni murtiis gaafa 29/1/2013 ALH’tti qaamaan akka dhiyeessan ajaja kennee jira.